प्रेममै छु तर मेरो लागि बिबाह अति आबश्यक कुरा होइन —अनुपम रोशी - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
२८ पुष २०७४, शुक्रबार १४:२३
यौनबारे खुलेर कृति लेख्ने लेखिका हुन अनुपम रोशी । केही वर्षअघि ‘कुमारी आमा’, ‘नांगो मान्छे’, ‘कालो छाया’ जस्ता उपन्यास लेखिकी अनुपम रोशीले यौन मनोविज्ञानलाई पछिल्लो चोटि पनि निरन्तरता दिदै कथाहरूको संग्रह ‘मध्यान्तर’ सार्बजनिक गरेकि छन । लेखिका रोशी आफ्नो लेखनमा यौन र मानवीय संवेदनालाई समेटिए पनि अश्लीलता टाढा हुने दावि गर्छिन । प्रस्तुत छ करिश्मा केसिले र रोशी संग गरेको लभ गफ ।
तपाई बिबाहित कि अबिबाहित ?
यसको जवाफ दिन मैलै चाहिन । किनकी यो मेरो नितान्त ब्यक्तिगत कुरा हो । म बिबाहित हुँ वा अ बिबाहित हुँ भन्ने कुरा समाजलाई चाहिन्छ र भन्ने लाग्छ ।
बिबाहित वा अबिबाहित भनेर खुलाउन नचाहने मान्छे मायाँ प्रेममा पर्नु भा छ कि नाई ?
डेफीनेट्ली प्रेम नहुँने त कुरै भएन । प्रेममै छु म ।
प्रेमको लागि कस्तो ब्यक्ति तपाईको रोजाईमा पर्नु भयो ?
मलाई मान्छेको आर्कषण, मान्छेको सौन्दर्यले भन्दापनि उसको बौद्धिकता र उसंग कुरा गरिसकेपछि उसको कुराले कत्तिको प्रभाव पार्न सक्यो भन्ने कुरामा भर पर्छ । कुनै मान्छेले राम्रो खालको बौद्धिक कुरा गर्छ र प्रभावकारी कुरा गर्छ भने त्यो मान्छे संग मेरो अटोमेटीकल्ली प्रेम हुन्छ । अटोमेटीकल्ली आर्कषण बढ्छ । मेरो रोजाई यस्तै छ ।
उपन्यासहरु मार्फत यौनका बिषयहरु उठान गर्नुहुन्छ । केटाहरुको प्रपोज कत्तिको आउँछ ?
त्यो त नआउँने कुरै भएन । केटी मान्छे हुँ । उमेर पनि छ । उमेरमा त स्वभाविक कुरा हो । कस्तो कस्तो मान्छेलाइ त प्रेम गर्छन् मान्छेहरु होइन र ? मलाई प्रेम प्रस्ताब नआउने भन्ने त कुरै भएन । प्रस्ताब आउँछ प्रशस्तै ।
प्रेम प्रस्ताव आउँदा कस्तो प्रतिकृयाया जनाउनु हुन्छ ?
होइन यस्तो छ । प्रेम प्रस्ताव को मतलब कस्तो हुन्छ भने एउटा बाैिद्धक प्रेम भन्ने हुन्छ । त्यो बौद्धिक प्रेम गर्नेहरुसंग चै मेरो पनि प्रेम रहन्छ । अब सतहि प्रेम गर्न चाहने र म संग एकदमै नजिक हुन चाहनेहरुलाई चै म प्रेममा छु भन्ने कुरा मैले पहिले नै जानकारी गराउँछु पहिलो कुरा त । उहाँहरुलाई सके सम्म सम्झाउने प्रयत्न गर्छु यसरी चै हामि नजिकहुन सक्दैनौ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्दीने गर्छु ।
प्रेममा छु भन्नुहुन्छ, प्रेमीले बिहे गरौं भन्नुभएको छैन ?
त्यस्तो छैन । मेरो लागि बिबाह अति आबश्यक कुरा पनि होइन । बिबाह गर्नु नै पर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन । जीवन आफूलाई कसरी सहज हुन्छ त्यसरी बाँच्ने हो । म प्रेम गर्ने मान्छे हुँ । प्रेमका लागि मेरो ढोका खुला छ । तर म बिबाह गरेर बन्धनमा बाँधिन चाहन्न भन्ने कुरा उहाँलाई पनि थाहा छ त्यसकारणले गर्दा बिबाह प्रति हाम्रो खासै इन्टे«स छैन ।
घरपरिवारले कसरी हेर्नुहुन्छ ?
म आठ कक्षा पढ्दादेखी मेरो बाबाले मलाई बिहे गर्दिन खोज्नुभएको थियो । त्यही कारण म घर छोडेर हिडेको हो । अहिले चै अब यसले भनेको टेर्दीन अब आफ्नो खुसी गर्छे । जेसुकै गर्छे भन्ने हिसाबले केही भन्नुहुन्न ।
दुई वर्षको सम्बन्ध टुट्यो– गायक शान्तिम कोइराला